Shiinaha Spandex Jacquard Knitted High Stretch Elasticity Fabric breathable For Yoga Maro saaraha iyo alaab-qeybiye | Wenchang
Spandex Jacquard Knitted High Stretch Elasticity Maqaarka Neefsashada ee Dharka Yoga
Shayga No ： kwc21-4081
Waxyaabaha ： 88% Polyester 12% Spandex
Dabeecad ： lidka bakteeriyada E dabacsanaan sare ness Midab badan soon, ， dhidid, qoyaan nuugis ， Deg Deg qalalan ， Raaxo leh
Wixii Yoga, Jimicsi, Jimicsi, Nooc kasta oo Jimicsi ah, Ama Isticmaal Maalinle ah. Yoga Bra Isku Darso Fashion, Function Iyo Performance
Shayga MAYA KWC21-4081
Twill: Dunta dunta ah iyo dunta weft waa la isku dhajiyaa ugu yaraan laba dun, taas oo ah, 2 kor iyo 1 hoos ama 3 kor iyo 1 hoos. Ku darista dhibcaha xargaha iyo weft si ay u beddelaan qaabdhismeedka dharka, oo si wada jir ah loogu yeero dhar jilicsan. Astaamaha dharka noocan oo kale ah waa mid qaro weyn oo leh dareen xoog leh qaab-dhismeed saddex-cabbir leh. Waxaa jira 30 laamood, 40 laamood, iyo 60 laamood.
Maro Satin ah: dunta iyo weft waa la isku dhajiyaa ugu yaraan saddex yardaar, sidaa darteed tolida satinku waxay ka dhigeysaa dharka mid cufan, sidaa darteed dharka ayaa ka sii dhumuc weyn Waxyaalaha la tolay ee loo yaqaan 'Satin' waxay ka qaalisan yihiin kuwa la midka ah ee la midka ah iyo kuwa la isku tolo, oo dusha sare ee dharku waa mid siman, ganaax leh oo dhalaalaya. Toddobada toosan, tolidda tolida iyo satinku waa saddexda dariiqo ee aasaasiga ah ee dunta loo xidho iyo loo yaqaan 'weft'. Ma jiro farqi gaar ah oo u dhexeeya wanaagga iyo xumaanta halkan. Mid waliba wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah. Dhexdooda, satin waa hubaal kan ugu fiican ee dharka suufka saafiga ah.
Aynu ka hadalno cashuurta si faahfaahsan.
Satin satin waa inuu kala soocaa afar fikradood: satin, strip satin, gatin satin, satin jacquard.
Dhar noocee ah ayaa ah satin? Xaqiiqdii, horudhaca hadda, waxaad horey ufahantay in "tolmo caadi ah, labalaab, iyo satin" ay yihiin dhammaan dhar, oo aan ahayn dhar gaar ah.
Dharka ugu badan ee loo yaqaan 'satin' waa satin xariijimo, oo loo yaqaan 'satin strip'. Dareenku waa fiditaan fidsan oo jiif ah (fiiri sawirka). Iyadoo la adeegsanayo habka wax loo tolo marka hore ka dibna la dheeho, dharka noocan ah guud ahaan waa midab adag. Ma awoodo kubada, ma fududa in la libdho.
Waxa kale oo jira nooc satin ah, oo loo yaqaan 'satin grid', oo waliba midab adag leh oo ah nooca shabagga (eeg sawirka).
Dharka Satin iyo shabakadaha satin guud ahaan waa alaabta ceeriin ee gogosha hudheelka. Waa kuwo aan qaali ahayn oo raaxo iyo wax ku ool ah. Dharka Satin iyo shabaqyada satinka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu sameeyo xirmooyinka guriga, laakiin aad ayey uga yar yihiin caan ka badan dharka satin jacquard.
Dharka Jacquard: Qaabka dharka ayaa tolmo leh, ma ahan daabicis caadi ah, ama daabac. Markay maradu tolayso, dunta iyo qaabdhismeedka weftku waxay isu beddelayaan qaabab, tirinta dunta way fiicantahay, cufnaanta cirbadda dunta ayaa sarreysa, ma habboona, ma libdho, waxayna leedahay dareen wanaagsan oo raaxo leh. Jacquard aad buu caan uga yahay suuqa, gogosha satin waxay umuuqataa mid heer sare ah oo dhadhan fiican leh. Si loo kala saaro tayada satinka, isbarbar dhig tirada dunta iyo cufnaanta.
Satinku wuxuu kaloo ka hadlayaa tirinta dunta. Marka hore aan ka hadalno tirinta, taas oo ah waxa inta badan aan aragno 30, 40, 60, iwm! Tusaale ahaan, asxaabta qaar waxay ugu yeeraan 30S 30, waa isku mid, ma jiro wax farqi ah! Haddaba maxaa dhab ahaan loo tiriyaa? Waxaan ku fahmay sidan:
Tirintu waa heerka dhumucda dunta. Tusaale ahaan, hal garaam oo cudbi ah ayaa laga dhigi karaa 30 yarn oo 1 mitir ah, taas oo ah 30 yarn, halka hal garaam oo cudbi ah laga samayn karo 40 yarn oo dhererkeedu yahay 1 mitir, taas oo ah 40 dun; hal garaam oo cudbi ah ayaa laga samayn karaa 60 yarn. Xarig dhererkiisu yahay 1 mitir waa 60 dun. Xaqiiqdii, sare u qaadista tirada dunta, ayaa kafiican dunta. Caarada khafiifka ah waa in la tolo, jilicsanaanta iyo raaxada badan ayaa marada noqon doonta. Si kastaba ha noqotee, dharka sare ee tiradu waxay u baahan yihiin alaab ceyriin oo tayo sare leh (cudbi), sidoo kale waxay leeyihiin shuruudo sare oo loogu talagalay miiqyada miiqyada iyo mashiinnada dharka lagu tolo, sidaas darteed qiimaha dharka ayaa aad u sarreeya. Maro dhaadheer oo dun sare ah kuma habboona gogosha maxaa yeelay aad buu u khafiifsan yahay!
Xiga: Tayada Sare ee Biyo-Xireenka 100% Khafiifka ah Duufaanta Dabiiciga ah ee Ka Hortagga Dabiicadda Dabaqadda Dabiiciga ah
Dhar Custom ah oo la neefsan karo
Dhar Jacquard keligiis ah